Home » Business Directory » OIEC IGCSE Study Guide ( MIS, MISY, YIS, ILBC, DSY, PISM)
Email Address: oiectrainingcentre@gmail.com
Contact Number: 095139298 / 0973255281
Address: No.757, Mahabandoola Rd, Lanmadaw Tsp, Yangon.
Listed: August 9, 2014 10:50 pm
All A (သို့) A* ထွက်အောင်သင်ကြားပေးသည်။
January (သို့) May (သို့) October ဖြေဆိုမည့် Edexcel IGCSE (သို့) Cambridge IGCSE ကျောင်းသား/သူ များအတွက် မေးခွန်းဟောင်းများ သေချာစွာ မရမချင်း လေ့ကျင့်ပေးသည်။ လူဦးရေကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် အမြန်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
မြန်မာကျောင်းမှ၈တန်း ၊ ၉တန်း ၊ ၁၀တန်း နှင့် International ကျောင်းမှ အတန်းစုံ ဂိုက်ပြပေးသည်။
Ph: ၀၉၅၁၃၉၂၉၈/ ၀၉၇၃၂၅၅၂၈၁
Ad Reference ID: 98853e645fdc0579
education HORIZON MIS MISY Study Guide for ILBC YIS
Listed by: Mya Thet Nyein
Other items listed by Mya Thet Nyein
Latest items listed by Mya Thet Nyein »
All times are GMT 6.5. The time now is 8:37 pm.